मंसिर २६, २०७६ १२:५३:११
यसकारण गर्न हुँदैन आफ्नै गोत्रभित्र विहे मंसिर २४, २०७६
यौन क्षमता बढाउन खानुहोस् घरमै पाइने यस्ता खानेकुरा मंसिर २३, २०७६
कसिलो ब्रा लगाउनु हुन्छ? सावधान ! महिला तथा युवतीको भित्रि बस्त्र, ब्रा। मंसिर २३, २०७६
तनावमा हुनुहुन्छ ? तुरुन्तै मुड चेन्ज गर्नुहोस हाम्रो जीवनमा धेरै किसिमको उतारचढाव आउँछ । कहिलेकाही यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ, र हामी दुःखी हुन्छौं । हामीलाई केही काम गर्न मन लाग्दैन् । यस्तोमा धेरैबेर सम्म तनावमा रहिरहन्छौं । तनावमा रहँदा विस्तारै डिप्रेसनको शिकार बन्छौं । मंसिर २२, २०७६
जाडो महिनामा ढिला उठ्ने बानी छ ? सावधान ! लाग्न सक्छ गम्भिर रोग चिकित्सकहरूका अनुसार जाडो शुरू भएसँगै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण जाडो याममा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । मंसिर २०, २०७६
घिउकुमारीका यी १५ फाइदाबारे थाहा छ ? एलोभेरा अर्थात घिउकुमारी औषधीय गुणको वनस्पती हो, जो सहजै बगैंचा वा करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । यसलाई सानो गमलामा रोप्न सकिन्छ । हुर्काउन र स्यहार्नका लागि पनि खासै गाह्रो छैन । अर्थात हाम्रो निम्ति गुणकारी वनस्पती हो यो । मंसिर १५, २०७६
यौन सम्बन्धमा महिलाको चरमसुखबारे पुरुषले जान्नैपर्ने केही विषय अधिकांश पुरुषलाई फिमेल अर्गाजमको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । पुरुषहरुलाई आफू सन्तुष्ट भएपछि संगिनी पनि सन्तुष्ट भइन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, महिला र पुरुषको शरीरको बनावट भिन्न किसिमको हुनाले जसरी पुरुष सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसै गरी महिला सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । अतः महिलाको शारीरिक बनावट, उत्तेजना र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरुलाई अर्गाजम अर्थात् चरमोत्कर्षको अनुभव गराउनु पुरुषको दायित्व पनि हुन जान्छ । मंसिर १४, २०७६
याद गर्नुस् ! तपाईका यी बानीले मृगौला बिगार्न सक्छ.... मृगौला मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंगहरुमध्ये एक हो । विशेष गरी रगतमा हुने विकार र बढी भएको पानीलाई छानेर पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फ्याँक्ने र शरीरलाई स्वस्थ राख्ने विशिष्ट अंग हो यो । मृगौलाले रगतको विकारलाई छान्ने, त्यसलाई शुद्ध र शरीरको लागि उपयोगी बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ । रगतलाई शुद्ध अर्थात् विकाररहित बनाउनुका साथसाथै मृगौलाले विभिन्न हर्मोनहरु पनि पैदा गरिरहेको हुन्छ र यसले रगतमा रातो रक्तकोषको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । मृगौलाले रगतको माध्यमबाट शरीरको लागि चाहिने खनिजहरु सोस्ने, बढी भएको पानीलाई फ्याँक्ने र रगतको पीएच स्तरलाई ठीक्कको अवस्थामा राख्ने काम गररहेको हुन्छ । मंसिर १३, २०७६
तपाईलाई थाहा छ ? रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा के हुन्छ.. (जानी राखौ) रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउछ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ हाम्रो समाजमा । तर यो भ्रम मात्र हो । यौन सम्पर्क गर्दा मादक पदार्थ सेवनले अस्थायी रुपमा सकारात्मक परिणाम देखाएपनि दीर्घकालमा यसले नकारात्मक परिणाम देखाउन थाल्ने हुँदा सकेसम्म मादक पदार्थ सेवन गरेर यौन सम्पर्क नगर्नु नै राम्रो मानिन्छ । मादक पदार्थबाट निश्चय नै शक्ति पैदा हुन्छ । तर यसले पुरुष र महिलाबिच हुने भावनात्मक सम्बन्धमा भने कमि ल्याउछ । मंसिर १३, २०७६
सुन्तला खानुस् यस्ता छन् फाइदाहरु फलफूल स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । त्यसैले हामीले सकेसम्म मौसम अनुसार फलफूल खानु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जाडोको मौसम, जाडोमा अत्याधिक पाइने सुन्तला भने खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर यो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायक छ । मंसिर ८, २०७६
चक्कर आउने समस्या समाधानको सजिलो उपाय टाउको घुमाउने अर्थात चक्कर आउने समस्या अधिकांशले अनुभव गरेका हुन्छन् । कसैलाई कहिले काहिँ मात्रै चक्कर आउँछ भने कोहीलाई यसले नियमित रुपमा दुःख दिएको हुन्छ । मंसिर ७, २०७६
रक्सी पिउनुहुन्छ ? यी रोगको जोखिममा पर्नुहोला अत्याधिक जाड रक्सी खाने बानिले मानिस पूर्णतया रक्सिको अधिनमा हुन्छ । अत्याधिक मदिराको आदतलाई तत्काल छोड्दा पनि मानिसमा त्यसको प्रभाव लामो समय रहन्छ। रक्सीले बिचार, निन्द्रा , भावाना सामाजिक ब्यवहार , यौन सबैमा असर पर्छ । मंसिर ६, २०७६
आँखाको कालो घेरा हटाउने घरेलु उपाय पर्याप्त निद्राको कमी, कामको चाप, अत्यधिक तनावका कारणले आँखामा कालो घेरा (डार्क सर्कल) देखापर्छ । मंसिर ५, २०७६
टुसा उमारेका गेडागुडी खाँदाका फाइदा गेडागुडी टुसाउनका लागि करिब २४ घन्टा पानीमा गेडागुडी राख्नुपर्छ । १२–१२ घन्टामा पखालेर पानी परिवर्तन गर्नुपर्छ र एक ठाउँमा राख्नुपर्छ । करिब एक हप्तामा टुसाएको गेडागुडी प्रयोग गर्न सकिन्छ । मंसिर ५, २०७६